ती सज्जनलाई थाहा हुनु पर्ने सभ्य समाज तर्फ उन्मुख मान्छेहरु मृत्यदण्डको संसारबाट अपराध मुक्त संसार तर्फ उन्मुख हुन्छन । तर उनी हामीलाई अपराध मुक्त संसारबाट मृत्यदण्ड सहितको अपराधी संसार तिर डोर्याउंदै छन । ख्यातिलाई मार्नेलाई मृत्यदण्ड दिंदा कसैले पनि हुदैन भनेर भन्ने छैन । तर जनकारवाही र सफाया गर्नेहरुको हातमा कानुन पुग्यो भने मृत्यदण्ड पाउनेहरुको चयन कसले र कसरी गर्ने? भ्रष्ट पुलिस र नेताहरुको हालीमुहाली चल्दा चोर सजायमुक्त बनेर बाहिर हिड्ने र सोझा व्यक्ति समेत न्याय किन्न नसक्ने अवस्था र प्रमाणको अभावमा दोषी बनेर झुण्डिनु पर्ने अवस्था आयो भने? मृत्यदण्ड हैन अपराधमुक्त समाज बनाऔं जो १०-१५ वर्ष अगाडि हाम्रै देशमा थियो ।
क्षणीक आवेसमा आउँदा गरीने कुरा र सोचेर गरीने कुरा सधैं फरक हुन्छन र हुनुपर्छ पनि ।
तर जे जसो गरे पनि 'दीन नसकीने कुरा' लिनु पनि हुँदैन । तपाईको अन्तीम लाईनले यसको सम्भाबी खतरनाक औचित्यलाई संकेत गरीसकेको छ:
यदी नेपालमा मृत्युदण्डको शुरुवात गरे त्यो केबल आफ्नो बिरोधीको सफाया गर्ने माध्यम बन्नेछ ।
अनि पाण्डाजीको तर्क पनि एकदमै सहि छ। न्याय किन बेच हुने ठाँउमा यस्तो कानून बन्यो भने के हुन्छ ?। एउटै मुद्दामा परेका मतियार थुनीई रहदाँ हाम्रा देशका एकजना पहुँचवाला पत्रकार खुल्ला हावामा घुमीरहेको त हामी सबैले देखेकै हो । भोली यस्तै ताल रहे, अपराधि खर्च गरेर उम्कीन्छ भने सोझो मान्छे भने कसैको बलीको बोको बनेर झुण्डीनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।